Pc ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Touch ကို Keyboard ကို China Manufacturers & Suppliers & Factory
Pc ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Touch ကို Keyboard ကို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Pc ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Touch ကို Keyboard ကို ထုတ်ကုန်များ)
min ။ အမိန့်: 1500+ Piece/Pieces
laptop အစိတ်အပိုင်းများသတ္တုများပုံသွန်း rheological သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် thixotropic သတ္တုများပုံသွန်းသို့ကွဲပြား, laptop အစိတ်အပိုင်းများကိုမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, Semi-အစိုင်အခဲ ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တိုတောင်းဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်မားထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, အများဆုံးအဆင့်မြင့် rheology...
ကြောင့်အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်, စျေးကွက် ပို. ပို. မြင့်မားဘက်ပေါင်းစုံ, ပါးလွှာ, miniaturized နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်လာနေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထူးအိမ်သင်-ရံနှငျ့ပိ Casting သတ္တိလည်းရှိတယ်။ semi...
Components OEM Casting မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကို Semi-Solid သေ
မြင့်မားသောဖိအားသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းများအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်း Casting Die ဖြစ်ပြီး, အတော်ကြာဖြစ်စဉ်ကိုမျိုးကွဲတိုးတက်လာသောသတ္တုများပုံသွန်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်တီထွင်လျက်ရှိသည်။ သံမဏိတစတုတ္ထနှင့်လူမီနီယံ၏သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့် ပတ်သက်. ယင်း၏သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ, မဂ္ဂနီဆီယမ်မော်တော်ယာဉ်, အာကာသ,...
အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကို Semi-Solid သေ
အဆိုပါအာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းရှည်လျားယာဉ်ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လေယာဉ်တင် House, အတွင်းပိုင်း, Aero အင်ဂျင်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, ရဟတ်ယာဉ် transmission ကိုများနှင့်လေယာဉ်ပျံအချက်အချာအတွက်မြင့်မားသောအိမ်ခြံမြေမဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်ကျယ်ကျယ်ရဟတ်ယာဉ်ဂီယာ Case...
Pc ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Touch ကို Keyboard ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Keyboard ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Computer ကို Frame က
Light ကမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Panel ကို
လူမီနီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Notebook PC ကို Panel ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Properties ကို